Na njedebe nke Nnukwu Ọchịchị M | Martech Zone
Oge ụfọdụ a na m eche na ndị na - agụ blọgụ m amatala m kemgbe ọtụtụ afọ. Nyaahụ m tinyere blog post na-ajụ ma ọ bụrụ Obama bụ Vista na-esote. Chei, lee oke oku nke welitere! Usoro okwu a siri ike n'aka ekpe na aka nri nke mere na ekweghị m itinye ọtụtụ n'ime ihe ndị ahụ.
My blog bụ Blog na Teknụzụ blog, ọ bụghị blog ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nke m ọchị bụ ebumnuche na m na -eji uru nke ewu ewu nke ntuli aka a. Ka m tetara n'ụtụtụ a wee chọpụta na Barack Obama bụ Onye isi ala anyị, M na-eguzo n'akụkụ post ma, ọ bụghị naanị olile anya, kama na-ekpe ekpere ka Obama anapụta na mgbanwe nke o kwere na nkwa. (Dị ka onye nọọrọ onwe ya, agbanyeghị, anaghị m enwe nchekwube.)
Maka ndị sitere na ekpe nke wakporo m maka ọkwa ahụ, ọ dị mkpa ka ị kwụsị ịkpọasị na mwakpo ọjọọ na onye ọ bụla na-ajụ ndị isi gị ajụjụ. Authorityjụ ajụjụ ikike bụ akụkụ nke nnwere onwe nke mụ na ndị ọzọ lụrụ ọgụ maka obodo a ma ọ bụ ọrụ anyị dị ka ụmụ amaala nke mba nweere onwe anyị ịjụ onye ndu ajụjụ ma jide ha. Enwere m mmechuihu na ihe edere ede nye m. Ahụtụbeghị m ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'anya ma chee na ọ bụ isi ihe kpatara anyị ji nwee nkewa dị otú a na mba a.
Ihe kacha sie ike, n'ezie, bụ m akwado Obama site na primaries na-agwa ụmụ m otu ụbọchị dị egwu n'akụkọ ihe mere eme ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na a họpụtara ya ịbụ onye isi ala. Ọ bụ mgbe Obama họpụtara Biden ka ọ bụrụ osote onye isi, m kwụsịrị ịkwado mkpọsa ya.
Maka ndị nọ na nri, ọ bụ oge na ị ga-a miri miri emi otú ị na-emebi ike gị. Mgbe inwere ohere iduru obodo a, chọta ohere iji gafee usoro ndị ọzọ, ma duru onye ọ bụla na nrọ ndị America, ị na-eduga na hubris ma leghara ndị kachasị mkpa gị anya.
Ọ jọgburu onwe ya ile ihe ị mere Republican Party na nfu gị bụ naanị ụta gị. Ekwula ya na mgbasa ozi - ị nyere nri maka ndị na-alụ ọgụ mgbe niile.
Ọ bụ ụbọchị dị ukwuu nye America
M na-abụ onye American dị mpako mgbe niile, ma taa bụ nnukwu ụbọchị. N'agbanyeghị otu afọ anọ sochirinụ si aga, ọ bụ usoro dị ịtụnanya n'ụzọ ziri ezi maka ọgwụgwọ maka nsogbu agbụrụ na-aga n'ihu nke kewara mba a ogologo oge. N’ọnwa a mụrụ m, e nwee ọgba aghara n’obodo ahụ, e debanyere Iwu Ndị Ruuru Mmadụ na Martin Luther King izu ike.
Ọ dị mwute na ọ were afọ iri anọ, mana ọ bụ ka ụbọchị dị egwu na America. N'ezie, ọ bụ ụbọchị mbụ n'ime afọ 40 na mba a enweela ihe omume dị mkpa nke mere ka ịkpa ókè agbụrụ banye na gọta nke ọ bụ. N'agbanyeghị otu akụkụ wara wara ị si, ọ bụ oke ụbọchị ịbụ onye America.
Tags: 2008barack obamaObamandọrọ ndọrọ ọchịchịịde blọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchịndọrọ ndọrọ ọchịchịelekọta mmadụ media
Nov 5, 2008 na 9:46 AM
Ekwenyere m, daalụ maka post na-esochi. Anaghị m akwado Obama ma ghara ịtụ vootu. Echere m na ọ wetara ọtụtụ ihe ukwu na Congress na ọ bụ ụdị onye m chọrọ itinye aka na usoro a, anaghị m akwado ya dị ka onye ndú nke mba ahụ dum. Agbanyeghị, nke ahụ agbanweghị eziokwu na ọ bụzi onye isi ala m na ọ bụ obodo m. Enwere m olile anya na ọ nwere ike iwepụta mgbanwe ọ gbaghaara na ihe niile a. Mana, dị ka gị, anaghị m atụ anya na a ga-eweta ọtụtụ ihe na nkwa nke ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na n'akụkụ ọ bụla nke wara wara ahụ.
Nov 5, 2008 na 3:18 PM
Nov 5, 2008 na 5:41 PM
FWIW, enwere m obi ụtọ na ọkwa Obama-Vista gị wee nwee mmetụta na ihe ndị ahụ dị mma ma nwee obi ọkụ. Ọbụna m debere ya na Twitter.
Ndị mmadụ kwesịrị ịmụrụ ọkụ ma gabiga nkwupụta ntụli aka niile. Ntuli aka bụ asọmpi. Asọmpi na-asọmpi ma mgbe ụfọdụ na-eme ka ndị na-enyo enyo pụta na esemokwu. Ọ dị ụzọ ọzọ na-ejikọ anyị ọnụ karịa ịdọwa anyị. Anyị niile nọ na nke a. Mazi Obama bụ onye ọ bụla nọ na Onye isi ala America a họpụtara ugbu a, ọ bụghị naanị ndị Democrats.
Na-ahapụ ihe niile na-aga n'ihu na-Chineke-ọsọ na-edozi nsogbu anyị.
Nov 5, 2008 na 5:43 PM
Nov 7, 2008 na 5:47 PM
Doug, mwakpo ọjọọ ndị si n'aka ekpe bụ ụzọ aghụghọ si n'aka nri mụta. Maka oge mbụ mgbe m toro eto, enwere m obi ụtọ ịbụ onye America na onye mba m nwere isi. Oge eruola ka anyị gbakọta ọnụ dị ka otu mba maka ọdịmma, akụ na ụba, ike, kpọlata ndị agha, nye olileanya maka ndị isi ala, ma kpee ekpere ka anyị niile bilie dịka United United na-akwado ndị isi anyị. ụmụ anyị ga-achọ ịdị ka Barack kama ịdị ka Mike ma ọ bụ 50 cent. Ọ bụrụ na agụmakwụkwọ abụrụla ihe kacha mkpa maka ntorobịa America karịa nhọpụta Obama ga-abụ nnukwu ihe kpatara ya. N'obodo America ụfọdụ anyị nwere ọnụọgụ ọnya dị ntakịrị karịa 75% na-eme ka olileanya dịrị ndụ. Doug lee m post, oge anyị eruola http://www.blackinbusiness.org